/blog/gallery/Ntuziaka Zuru Oke 2019 Maka SARM SR9009 Isi
Ihe na 10 / 14 / 2019 by Dr. Patrick Young dere na gallery.
1.What bu SR9009?
SR9009 ma ọ bụ stenabolic bụ mgbakwunye CAS 1379686-29-9 na-agbaso mmetụta nke mmega ahụ cardio. Ọbụghị naanị ọgwụ ga - enyere gị aka belata ụfọdụ abụba gị karịrị akarị, mana ọ ga - emekwa ka ike gwụ gị ka ọ na - eme ka ntachi obi sikwuo ike.
SR9009 bụ kọlụm na-agbanwe agbanwe, nke malitere site n'aka ndị Prọfesọ Thomas Burris. O nwere njikọ chiri anya SARMS (Selective Androgen Receptor Modulators), mana ọ na-ewute protein protein Rev-Erbα nke dị na akwara ọkpụkpụ, akwara adị, ụbụrụ na umeji.
Prọfesọ Burris gbagotere SR9009 (1379686-29-9), na-ezube ịmụ na ịghọta ụdị ụda ọgbụgba.
2.How anam SR9009?
Know maara na mmetụta ị na-enweta mgbe ị gbasasịrị 2km na igwe na-akụ ma ọ bụ bulie ụfọdụ ibu dị arọ? Ka osi di, SR9009 ọgwụ ọgwụ ọjọọ ga-eme ka obi ju gi otu a. Ihe mgbakwunye a nwere ọrụ n'ọdịdị nke circadian modulation, ụkpụrụ ndụ, yana ịchịkwa ọkwa glucose.
SR9009 SARM na-arụ ọrụ dị mkpa na mkpali nke Rev-Erb. Protein a na - emetụta ike nke anụ ahụ maka iyu oke abụba, shuga, na kọleji ọjọọ. Ya mere, ọ na - eme ka usoro ihe dị nfe belata belata ya. Ọ bụrụgodi na ị na-emega ahụ, obi ga-adị gị ike na ike gwụ gị nke na ị ga - emekwu mmega ahụ.
Stenabolic metabolizes abụba, lipids, na shuga. Mgbe ume ọrụ nke anụ ahụ kachasị, mgbe ahụ ị ga - enwe ike ịrụzu ọrụ kacha elu. Na ọmụmụ nnukwute iji ụdị ihe atụ, ụmụ oke ndị dị n'okpuru SR9009 ntụ ntụ (1379686-30-2) usoro ogwu nwere ike ịgba ọsọ okpukpu abụọ karịa tupu. Ihe akaebe a nwere ike ịbụ ihe kpatara stenabolic edepụtara n'etiti ọgwụ ndị amachibidoro ije egwuregwu.
Ọ bụrụ na ị bụghị mgbatị ahụ arụ, akụkọ a bụ ihe ntị gị na-achọ ịnụ. Stenabolic na-emekwa ka usoro metabolic gị okpukpu abụọ ka ị na-ezu ike. Mgbe i risịrị nri, ahụ gị na-agbanwe nri ahụ abụba. Agbanyeghị, mgbakwunye ịdị arọ nke SR9009 ga-eme ka metabolism dị elu ngwa ngwa nke na ị ga-amalite gbaa abụba ozugbo.
Nnyocha ndị e mere n'oge na-adịbeghị anya gosiri na stenabolic bụ ọgwụ na-egbochi ọrịa kansa. Ọkpụkpọ cancer cancer SR9009 na-emetụta ndị ọkwọ oncogenic, gụnyere PIK3CA, HRAS, na BRAF. Nime mkpụrụ ndụ dị oke njọ, ngwaahịa a na - ebute apoptosis ma na - egbochi uto etolite na - enweghị ihe ọjọọ.
3.How iji SR9009
Ewezuga aha njiri anya nke uru uru SR9009 ogwu, ihe mgbakwunye nwere otutu ọgwụ ọgwụ. Ndị dọkịta na-agwọ ọrịa ga-akwado ya nke ọma maka ndị ọrịa mamịrị na ndị ahụ nwere ọrịa ọnya ọnya.
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịchịkwa SR9009 ntụ ntụ (1379686-30-2) maka ijikwa oria gị, jide n'aka ịgwa dọkịta gị tupu oge eruo. Ọgwụ ahụ adịghị mma, mana dibịa gị ga-enyerịrị gị ndụmọdụ gbasara ọgwụ dị ugbu a ka ị na-enyocha ihe mgbaàmà ọ bụla.
Maka iji aha akara apụ, usoro ọgwụgwọ SR9009 bụ ihe dị ka 30mg / ụbọchị. A na-ekewa ọgwụ ahụ ụzọ atọ.
Ọ bụrụ na ị gachara ntachi obi, ị ga-ewere mgbakwunye ahụ obere oge tupu ịkụ mgbatị ahụ. Ihe kpatara ya bu na SR9009 nwere obere ndu-nwa; N'ihi ya, nsonaazụ ya na-egosi na ọkụ. Dị ka o kwesịrị, jisie ya ike tupu ị rie nri ka ị nwee ike ijigide metabolism nke ọma ụbọchị niile.
4.B Enyemaka nke SR9009, G in i Na-atụ Anya?
Kwalite Ibu Ibu
SR9009 SARM na-eme ka usoro metabolic dịkwuo mma. Ozugbo abatabeghị, stenabolic ga-eme ka ahụ sie ọkụ ahụ ọkụ karịa ịtụgharị ha abụba. Ọ bụghị naanị na mmeju ahụ na-agbakọkwa mkpụrụ ndụ ihe na-akpata abụba, mana ọ na-ebelata mmepụta nke mkpụrụ ndụ abụba ọhụrụ na imeju.
Ọ bụrụ n ’ebumnuche gị bụ ka ị ghara ime ka ị ghara iru felata, hụ na ị ga-etinye mmega ahụ n’oge ị na-eme ihe. Workingrụ ọrụ, nri, na iwere SR9009 tupu mgbatị ahụ na - eme ka ọkụ na --efe oke abụba dị ọkụ. Nnyocha na-egosi na iji stenabolic na-ebelata abụba acid na plasma triglycerides ịta site na 23% na 12%, n'otu n'otu.
N'ihe banyere oke ịrụ ọrụ ma ọ bụ iri nri abụghịzi nhọrọ, ndị dọkịta ga-ekwuputa mmezi a.
Na-ahazi site na nyocha ndị ahịa, otu onye kwenyesiri ike na SR9009 ntụ ntụ (1379686-30-2) nyeere ya aka wepu paịrọ 17 n'ime ọnwa atọ.
Ihe mgbakwunye a abụghị naanị na-eme ka uru ahụ ghara ịdị kamakwa ọ na-eme ka ike na arụmọrụ ya ka mma. Mmetụta ị na-enweta mgbe ị nwesịrị ịXụ ọgwụ SR9009 kwekọrọ na nke ibu.
Ọgwụ na-akpali oke mmepụta nke mitochondria n'ime sel akwara, na-ebuli metabolism. Ndị a na-ahụ maka ịmepụta ike na akwara olu. Na mgbakwunye, a ga-enwe mmụba na ojiji glucose na oriri acid na - abụba n'ime akwara.
N ’ụlọ ọgwụ, SR9009 na-enyere ndị agadi aka na-ata ahụhụ site na mmebi akwara ma ọ bụ sarcopenia.
Na-emekwu Ntachi Obi
Imirikiti mgbatị ahụ agaghị echezọ itinye SR9009 uru uru ahụ ike na usoro ahụ. Will ga - ebulikwa ibu ma ọ bụ tụọ ụkwụ ma ọ bụ mee ihe omume ọbụla na - enweghị ike gwụ gị ma ọ bụ enweghị isi.
Ihe mgbakwunye a ga-ejide ọrụ gị ọkaibe karịa ka ọ dị na mbụ. Ọ bụrụ na i chere na uru SR9009 ndị a bụ ojoro, ị ga - eche na ihe kpatara ụlọ ọrụ na - egbochi ọgwụ ga - egbochi mmachibido iji egwuregwu asọmpi.
Dika Thomas Burris, onye nchoputa nke Stenabolic kwuru, ogwu ahu gha emeghari gi ka ị bụrụ onye egwuregwu n’etu oge. Ike gị agaghị agwụ gị ọbụlagodi mgbe ị na-eme mmega ahụ siri ike.
Ọ bụrụ na ị na-ero ụra mgbe niile n’ehihie, stenabolic nwere ike ịbụ ọgwụgwọ ọzọ. N'ime usoro ọmụmụ, usoro mgbakwunye ahụ yiri ka ọ na-agbanwe usoro ihi ụra nke ụdị ihe atụ. Ndị ọkà mmụta sayensị chọpụtara na ụmụ oke ndị ahụ na-amụ anya n'oge ehihie, ọ dịghịkwa nke ọ bụla n'ime ha nwere ike ịrahụ ụra miri emi. Yabụ, ọ bụrụ na ịchọrọ mbanye anataghị ikike na mpaghara ịgba ọsọ gị iji gbanwee usoro ihi ụra gị, SR9009 ga-eji ọlyụ mee ya.
Site na obere ndụ ọkara nke SR9009, mmetụta ịmụrụ anya ga-adị mkpụmkpụ. Yabụ, ị gaghị anọ naanị ụbọchị ahụ.
Mmebi Tissue (Fibrosis)
Nchọpụta gosipụtara na ụmụ oke na fibrosis imeju agbakeela nke ọma mgbe o mechara SR9009 maka izu abụọ.
Ọ Na - egbochi Ọrịa Obi
N'ọnọdụ ebe obi na-abawanye ụba, SR9009 ntụ ntụ (1379686-30-2) na-arụ ọrụ iji gbanwee ntụgharị ahụ site na ibelata ogo na ibu ya. Mgbe e jiri ọgwụ stenabolic mesoo ụfọdụ ụmụ irighiri akwara siri ike, ndị nchọpụta chọpụtara mbelata nha nke ọnya ọbara arịa mechara izu asaa.
Usersfọdụ ndị ọrụ kwuputere na mgbakwunye ahụ rụpụtara ọrụ dị mkpa na mbelata ọbara mgbali elu ha.
Na -ebelata cholesterol ọbara
Ọ bụrụ na ị buru oke ibu, ohere ị ga-enwe bụ na ọkwa cholesterol gị dị elu. SR9009 ga-egbutu ruo 47% nke LDL, si otú a na-eme ka mgbatị gị rụọ ọrụ karịa. Shouldkwesịrị ịmara na mgbakwunye ahụ anaghị emetụta ọkwa HDL.
Rev-Erbs rụrụ ọrụ dị mkpa n'ịhazi mbufụt na mmerụ ahụ n'ime CNS. SR9009 na-akpali ndị na-anabata nuklia nke Rev-Erbα, nke nwere mmetụta mgbochi mkpali.
Ọgwụ na-egbochi mmepụta nke mkpụrụ ndụ mbufụt dịka CCL2, MMP-9, na TNF-α. Ebe ọ bụ na mbibi anụ ahụ na mbufụt na-adịghị ala ala bụ ihe oncogenic, ndị ọkà mmụta sayensị na-amụ atụmanya nke SR9009 cancer antagonist na oncogene-induced senescence.
SR9009 na-ebelata nchegbu na ụdị ụmụ oke.
Ọ bụrụ na ị nwere trypanophobia, enwere ụfọdụ ozi ọma maka gị. Ọ dị mma, SR9009 dị maka nchịkwa ọnụ. Ọ dịghị ụgwụ inje na-egbu mgbu, dị ka ọ na-eme ọtụtụ ọgwụ na-egbu egbu.
Ndụ 5.Half nke SR9009
Nkeji ọkara ọkara nke SR9009 dị obere ka awa anọ. Maka nke a, ị ga-ekeji usoro gị ka oge awa anọ iji wee kwụsie ike bioavailability nke ọgwụ ọbara.
Usoro onyonyo nke 6.SR9009
SR9009 usoro onunu ogwu na-agbado n’elu ihe ole na ole. Nke ahụ bụ, ihe ịchọrọ imezu na ma ị na-etinye mgbakwunye ndị ọzọ na okirikiri gị. E wezuga ya, ego a na-edenye n’usoro ahụ dịkwa n’otú ahụ gị si emeghachi omume.
Nkezi onwa bu 30mg kwa ubochi, nke inwere ike kee uzo ato di iche. Nkọwapụta, ọgwụ a pụtara na ị ga-eji ọgwụ ahụ tupu ị anyụọ ihe ọ bụla n'ụlọ oriri atọ gị. Kama, ịnwere ike iji mgbakwunye ahụ mgbe awa anọ ọ bụla.
Ọtụtụ mgbe, ịgbanye SR9009 ntụ ntụ (1379686-30-2) tupu mgbatị ahụ ike nwere ike iwe iwe, ọkachasị ndị ọrụ enweghị ndidi. Nye ga-a aụ ọgwụ ọvalsụ n ’awa nke awa anọ n’enweghị nsogbu? Yabụ, ọ bụrụ na obi adaghị gị ike na usoro ịpụga a, ị nwere ike ikpebi iji ya otu awa tupu ịmalite ịme ahụ.
Otu usoro 'SR9009' na-aga n'etiti izu asatọ ruo izu iri na abụọ. Ebe ọ bụ na enwere atụmanya nke ịnagide ọgwụ ahụ, ọ dị mma maka iwepụ izu 8.
Ọgwụ a anaghị emetụta imeju ma ọ bụ akụrụ. Agbanyeghị, ị nwere ike ichebe akụkụ ahụ ndị a site na itinye mgbakwunye nchedo ndị ọzọ dị mkpa dị ka N2Guard na usoro SR9009 gị.
7.Do I choro PCT maka SR9009?
N'adịghị ka mgbakwunye ndị ọzọ, stenabolic achọghị PCT (Post Cycle Therapy) ebe ọgwụ a anaghị egbochi ọkwa nke testosterone.
8.Possible Ad Side Side Mmetụta yana Ize Ndụ nke SR9009
Ihe mgbaàmà ndị a dị n'elu ga-emetụta ndị mbido. Ozugbo ahụ gị ga-agbaso na mmeju, mgbaàmà ga-apụ n'anya. Agbanyeghị, ọ bụrụ na mmetụta SR9009 mee ka ọ bụrụ ihe na - adịghị mma, ịkwesịrị ịkwụsị ya ma gwa dọkịta gị.
SR9009 nwere ike ịka njọ ọnọdụ ụmụ nwoke nwere libido dị ala ma ọ bụ dysfunctions dysfunctions. Mgbe ụfọdụ, mgbakwunye na-eduga na ọkwa testosterone dị ala.
Stenabolic abụghị a steroid. Yabụ, ị were ya agaghị egbochi usoro homonụ. Ọnụọgụ testosterone gị agaghị ada, ọgwụ ọgwụ agaghịkwa amị n'ime estrogen. Maka ndị inyom, ihe mgbakwunye ahụ agaghị eme ka ọ bụrụ nsọ nwanyị.
9.Stacking SR9009 na SARM ndị ọzọ
Stack SR9009 na Ostarine (MK-2866) ga-enweta nsonaazụ ndị pụrụ iche, ọkachasị maka usoro ịmalitegharị.
Ostarine, nke aka ya, bụ SARM mara mma maka ịkwado ma usoro ịkpụcha. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ ntachi obi kachasị, ị kwesịrị iji SR9009 kụọ ya. Mgbe ị nọ na oghere ahụ, hụ na ị ga-eji 25mg nke ostarine kwa ụbọchị. Maka stenabolic, 10mg ga-arụ ọrụ, mana ị ga-ewere ya mgbe ị na-achọ iti ebe mgbatị ahụ.
SR9009 na GW501516 (Cardarine) inwe myirịta. Studiesfọdụ ọmụmụ kwudịrị na ngwakọta abụọ a na-ejikọ otu ndị na-anabata ya.
Dịka ị maralarị, stenabolic nwere ndụ ogologo oge, nke na-agaghị adịgide ogologo ụbọchị gị niile. N'aka nke ọzọ, bioaine bioaine dịịrị awa 24. Nchikota nke uzo abuo a gha eme ka enwe mmetụta 24 / 7.
Ọ bụrụ na ị na-eji SR9009 n'akụkụ GW501516, ị kwesịrị ịtụle ndị nke mbụ dịka mgbakwunye mmezi tupu arụ ọrụ. Ikwu okwu, ikwesiri ichi stenabolic n’ụbọchị ị na-arụ ọrụ.
Mgbe nọ na SR9009 tojupụtara, usoro onunu ogwu ahụ bụ naanị 10mg, nke ị ga-emerịrị obere oge tupu ị rụọ ọrụ. Maka GW501516, ezigbo ndenye ọgwụ bụ 20mg / nke ị ga-eji rie nri ụtụtụ gị.
SR9009 maka ire ere na-elekwasị anya na ndị na - arụ arụ bụ ndị nwere ntachi obi, ịbawanye arụmọrụ anụ ahụ, mgbake ngwa ngwa site n'ịrụ ọrụ na iwulite akwara anụ ahụ.
Site na nyocha dị iche iche dị na ntanetị, ndị ọrụ na-akọ na mgbakwunye ahụ kwụkwuru ntachi obi ka ha nwere ike ịme mmega ahụ siri ike na-enweghị ike gwụrụ ha. Nye ụfọdụ, mmụba nke ike na mmụba nke ike nọ na ọkwa dị elu ozugbo ị nyesịrị SR9009 ntụ ntụ (1379686-30-2).
N'akụkụ na-adịghị mma, ụfọdụ ndị ọrụ anaghị enwe afọ ojuju ị theụ ya ugboro anọ kwa awa. Agbanyeghị, ndị na - eji SR9009 ahuteghị nke a bụ ihe na - enye nsogbu n'ihi na ha ga - ewere mgbakwunye ahụ mgbe ha na - aga mgbatị ahụ.
Ndị na-azụ ahịa ole na ole kwupụtara na stenabolic emeghị ka ha nwee mmetụta dị ukwuu. Ewezuga ehighị ụra nke ọma, ọ nweghị onye yiri ka ọ na-edebanye aha ọjọọ n'akụkụ mmetụta SR9009.
11.Is SR9009 Bioavati?
Enweela asịrị na SR9009 enweghị bioavailability efu, ọkachasị na nchịkwa ọnụ. Agbanyeghị, enwere m obi ike ịgbagha nke a n'ihi na ọ bụrụ na emeghị mgbakwunye bioavish, mgbe ahụ enwere ike inwe nsonaazụ ziri ezi nke SR9009 na ahụ mmadụ.
12.Where ịzụta SR9009
Ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-etinye SR9009 maka ọrịre. Ọ bụ ezie na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị bụ ebe dị mma maka ịzụta mgbakwunye, ị kwesịrị ịkpachara anya ịghara ịdaba na ngwaahịa adịgboroja.
Ọ bụrụ na ịchọrọ stenabolic-ọkwa mmadụ, chọta ya site na onye na-eweta nnabata. Nwere ike iji usoro a AASraw.
13.SR9009 Maka Nrụpụta Ahụ
SR9009 ntụ ntụ (1379686-30-2) zoro n'ụlọ ọrụ na-ewuli ahụ elu mgbe nyocha mere gosiri na ihe mgbakwunye ahụ mere ụmụ oke nwere akwara. Na mgbakwunye, ha na-arụsi ọrụ ike, gosipụtara arụmọrụ arụmọrụ dị oke mma, ha na-emekwa ihe ike karịa ka ọ dị na mbụ.
Ndị na-ahụ maka anụ ahụ bụ ndị na-esochichara ma ọ bụ igbachapụ ga-erite uru zuru oke na SR9009. N'ọnọdụ ebe ị ga-azụ siri ike, ọgwụ ahụ na-ebulite ike obi gị kachasị elu, si otú a na -eme ka ihu na isi ike dị belata. Ihe ọzọ, SR9009 na-ewulite ahụ na-ebelata mbufụt na mbibi nke anụ ahụ ka usoro mgbake ahụ ozugbo enwere ike.
Ihe mgbakwunye ahụ na-ewuli SR9009 ọrụ maka nkwalite arụmọrụ. Ma ọ dịkarịa ala, enwere ọnwụnwa tozuru oke iji kwado eziokwu a yana nyocha ọnụọgụ nke njiri mara nke ngwaahịa.
Agbanyeghị, arụmọrụ nke ọgwụ a abụrụla oke nke esemokwu n'etiti ndị sayensị na ndị nyocha na ndị sayensị. Dika imaatu, enweela ihe nlere anya na onodu onu ogugu enwere ugbua nke SR9009. Di nma, achoghi m ime ihe na akwado onye ekwensu, mana 95% nke ndi stenabolic n’egosi ike ya. Na mgbakwunye, ị kwesịrị ịdị na-ajụ ihe kpatara òtù ndị na - egbochi ọgwụ doping nwere ike nweta nkwụsi ike iji ya eme egwuregwu ebe ihe adịghị arụ ọrụ.
Rịba ama na nsonaazụ SR9009 bụ ntụpọ mgbe ị na-arụ ọrụ kwa ụbọchị mgbe ị na-eri nri dị mma. Zere nri ndị nwere abụba, kalori, na steepụ ya na ị smokingụ sịga na ị drinkingụ mmanya.
Cho, H., Zhao, X. et al. (2012). Iwu nke omume agwa na Metabolism nke REV-ERBα na REV-ERBβ. Nchọpụta Ahụhụ Gene, Mahadum Salk maka Ọmụmụ Ihe Nkanụ.
Morioka, N., Zhang, FF, Tomori, M., Hisaoka-Nakashima, K., Saeki, M., na Nakata, Y. (2016). Mkpali nke Nuclear Receptor REV-ERBs na-achịkwa Tumor Necrosis Factor-Induced Expression of Pro-Inflammatory Molecules na C6 Astroglial sel.
Thomes, PG, Brandon-Warner, E., et al. (2016). Rev-Erb Agonist na TGF-β na-emetụta Autophagy mana ọ na-achịkwa iwu Ọdịiche Hepatic Stellate Cell Fibrogenic Phenotype. Int J Biochem Cell Biol.
Dodson, B. (2013). Ngwọta Ọgwụ Ọhụrụ Ọhụrụ Mmetụta Nke Mmega Ahụ. Ahụike na Nlekọta.
Woldt, E., Sebti, Y. Et al. (2013). Rev-Erbα Modulates Ake Oxidative Skeletal Muscle Oxidative ikike site na ịhazi Mitochondrial Biogenesis na Autophagy. Journal of Medicine eke.
Sulli, G., Rommel, A., et al. (2018). Mmegharị ọgwụ nke REV-ERB bụ Ọrịa Cancer na Oncogene-Induced Senescence. Nature (esịtidem Journal of Science).
Echiche ndị a na-ahụkarị na steeti anabolic steroid	Ihe ọ bụla gbasara Oxandrolone (Anavar), ịkwesịrị ịma